बुटवल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीको भविष्य कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रेस सङ्गठन बुटवलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पौडेलले पार्टी अत्यन्त कठिन मोडमा गुज्रेको बताएका हुन्।
नेकपामा जारी अन्तरविरोध नेपाली जनता, नेकपाका मतदाता र लाखौं कार्यकर्ताको चाहाना विपरीत रहेको पनि उनले बताए। पार्टीमा उत्पन्न अहिलेको विवाद नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा ठूलो समस्या र चुनौतीका रूपमा देखापरेको महासचिव पौडेलको भनाई छ।
नेकपा आन्तरिक विवादमा रुमल्लिँदा विगतमा जनतासँग गरेका बाचा, प्रतिबद्धता र योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा पुगेको उनले बताए। अब जनतालाई जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा समेत नेकपा नरहेको पौडेलको भनाई थियो। उनले नेकपाको एकता जनताको भविष्यसँग जोडिएकोले अन्तिम क्षणसम्म पनि पार्टी एकताको रक्षाका लागि आफू प्रयास गरिरहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
नेकपाभित्र विवाद आफूले समेत बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेकपामा कहाँबाट त्यस्तो सुनामी आयो ? कहाँबाट त्यस्तो भूकम्प आयो ? के त्यस्तो आँधी आयो ?’ सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, पार्टीसँगको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउन एकता महाधिवेशनको तयारी गर्ने लगायतका स्थायी समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुँदा पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको महासचिव पौडेलले बताए।